मिथिलाञ्चलमा जितियाकाे राैनक, किन मनाइन्छ यो पर्व ?
सुजीतकुमार झा जनकपुर, ३ असाेज
मिथिलाञ्चलका महिलाहरुको प्रमुख पर्व जितिया (दसैंको आसपासमा थारुजातिका नवयुवती र अधबैँसे स्त्रीहरुले माइतमा गएर घिरौँलाको पातमा घिरौंलाकै फूला राखेर गर्ने जित महान् को पूजा) आजबाट सुरु भएको छ । खासगरी पुत्रको दीर्घायुको लागि यो पर्वमा महिलाहरु अष्टमी तिथिभरी व्रत बस्ने गर्दछन् ।
यसैदिन सधवाले कोदो (मरूवा) रोटी र माछा खाने परम्परा रहेको छ ।
शाहाकारीले गम्हरी (कोसाभित्रै फल्ने धान) को खीर वा भात पनि खाने चलन छ । अष्टमी तिथि सुरु हुनुपूर्व व्रतालु महिला घरका सबै सदस्यसँग भित्तामा अडेस लगाइ च्युरा दही खाने गर्छन् । व्रतको क्रममा पानी पनि नखाने परम्परा छ । यसपाली पारण आइतबार साँझ ३ बजे हुनेछ । व्रतको क्रममा महिलाहरुले स्याल र चीलको कथा सुन्ने र सुनाउने गर्छन् ।
सन्तानको दीर्घ जीवन, पुत्रप्राप्ति तथा पारिवारिक सुख शान्तिका लागि मनाइने जितिया पर्वको धार्मिक सांस्कृतिक तथा तान्त्रिक महत्त्वसमेत छ । सांस्कृतिविद डा. भोगेन्द्र झा यो पर्वले मिथिला महिलाको सांस्कृतिक भूमिका र महत्त्व पनि उजागर गर्ने बताउँछन् ।
पितृ पक्षमा मनाइने पर्वमा महिलाले आफैंले दिंवगत पितृलाई पिण्डजस्तै चढाउँछन् ।
पुरानाे कथा छ, नर्मदा नदीको किनारमा कञ्चनवती नाम गरेको एउटा गाउँ थियो र उक्त ठाउँमा राजा मलायकेतुले राज गर्थे । खोलाको पश्चिमी किनारामा वलुहटा नाम गरेको एउटा मरुभूमि पनि थियो । त्यही किनारमा एउटा पाखैरको रुख थियो जसमा पोथी चील बस्थी । चील बस्ने रुखमुनी पोथी स्याल बस्थी ।
उनीहरुले मित्रता गरे । एकदिन जंगलका अरुलेजस्तै उनीहरुले पनि भगवान जीतवाहन गोँसाईको निर्जल व्रत बस्ने निर्णय गरे । तर, संयोगवश सोही दिन उनीहरु बस्ने मरुभूमिको छेउमा रहेको शहरको धनी व्यापारीको मरेको छोरालाई जलाउन ल्याउँछन् । पानी अत्यधिक परेका कारण मलामी आएकाहरु लासलाई त्यतिकै छोडेर हिन्छन् ।
चीलले अरुले जस्तै व्रत कायम राखे पनि पोथी स्यालले भने गाडेको लासको मासु सेवन गर्ने तीव्र थाम्न सक्दिन ।
अर्को जन्ममा यी दुवै चील र स्याल एउटै घरमा अनि ब्राम्हण परिवारमा दिदी–बहिनीका रुपमा जन्मिन्छन् ।
चील अब शिलवती नामकी ब्राम्हण कन्याको रुपमा जन्म लिन्छे भने स्याल यस जन्ममा कपुरवती हुन्छे । शिलवतीको बुद्धिसेन भन्ने व्यक्तिसँग अनि बहिनी कपुरवतीको विवाह राजा मलायकेतुसँग हुन्छ ।
शिलवतीको सात जना सुन्दर पुत्र हुन्छन् भने कपुरवतीको पुत्रको मृत्यु हुन्छ ।
शिलवतीका छोराहरुले राजा मलायाकेतुकोमा काम गर्न थाल्दछन् र ती केटाहरु आफ्नी दिदीका पुत्रहरु भएको थाहा पाएपछि स्यालबाट शिलवती बनेकी बहिनी कपुरवती रिसले चुर हुन्छे ।
राजालाई भनेर ती सातैजना शिलवतीका पुत्रहरुको हत्या गर्न लगाइ तिनको टाउकालाई रातो कपडामा बेरेर दिदीकोमा पठाउने षडयन्त्र गर्छे । तर, यो कुरा भगवान जीत महान गोँसाईले थाहा पाएपछि सातै छोरालाई बचाउँछन् । ती सातैजना पुत्रहरुलाई अमृत दिएर अमर बनाउँदै उनीहरुको टाउकोको साटो माटोको टाउको रातो कपडामा बेरिदिन्छन् । यसरी रातो कपडाले बेरिएको भाँडो शिलवतीको घरमा पुग्दा टाउकाको साटो फलफूलले भरिपूर्ण उपहारको रूपमा परिणत हुन्छ ।
यता, हत्याको योजना बुन्ने बहिनी कपुरवती आफ्नी दिदीको घरमा अब छोराहरुको मृत्युले रुवाबासी भइरहेको होला भन्ने अनुमान गरी एक सेविकालाई बुझ्न पठाउँछे । तर, शिलवतीको घरमा हर्ष उल्लास र खुसीयाली छाएको सन्देशयुक्त खबर उनीहरूले ल्याएपछि राजा मलायकेतु अर्थात् कपुरवतीका पतिले पक्कै पनि त्यो घरमा भगवानको कृपा छ भन्ने सोच्दछन् ।
दिदीको खुसी सहन नसकेर अब कपुरवती दिदीको घर पुग्छे र सम्पूर्ण कुरा भन्छे । यसो भन्दैगर्दा शिलवतीलाई पूर्वजन्मको कुरा याद आउँछ जहाँ उसले चीलको रुपमा भए पनि भगवान जीतमवाहन गोँसाईको व्रत बसेकी थिई । यो प्रशंग शिलवतीले बहिनीलाई भन्छे । यो सुनेर बहिनी कपुरवती बेहोस हुन्छे । लगत्तै उसको मृत्यु हुन्छ ।
यसै बेलादेखि भगवान जीतमहान गोँसाईको श्रद्दापूर्वक ढंगले आमाहरुले छोराछोरीको रक्षाका लागि जितिया पर्वमा व्रतको परम्परा थालेको मान्यता रहिआएको छ ।
विशेषतः नेपालको तराई, भारतलगायत संसारका धेरै देशमा वैदिक सनातन हिन्दु रीतअनुसार जितियाको व्रत लिइन्छ । यो व्रत कुनै धनधान्य अनि ऐश्वर्यका लागि नभइ नितान्त मातृस्नेह र मातृवात्सल्यको एउटा अद्भूत उदाहरण रहेको समाजशास्त्री महारुद्र झा बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ४, २०७६, ०४:२१:००